Soosaarayaasha Alaab Qaadista iyo Alaab-qeybiyeyaasha Hoose | Shaxda Warshad Qaadista Alaabada Shiinaha
Miiska wiishka maqaska wiishka waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu raro alaabada gawaarida, ka dib marka lagu rakibo barxadda godka. Waqtigaan, miiska iyo dhulku waa isku heer. Ka dib marka badeecadaha loo wareejiyo barxada, kor u qaad masraxa kor, ka dib waxaan u rari karnaa alaabada gawaarida.
Faa'iidada ugu weyn ee Jadwalka Qaadista Mashiinka 'Profile Scissor Lift Table' ayaa ah in dhererka qalabku yahay 85mm oo keliya. Maqnaanshaha forklift, waxaad si toos ah u isticmaali kartaa gawaarida gawaarida si aad ugu jiidato alaabada ama santuuqa miiska miiska iyada oo loo marayo jiirada, adoo kaydinaya kharashka forklift iyo hagaajinta waxtarka shaqada.
Miiska wiishka ee maqalka nooca U waxaa badanaa loo adeegsadaa qaadista iyo maaraynta santuuqyada alwaaxa iyo hawlaha kale ee maaraynta maaddada. Meelaha ugu muhiimsan ee shaqada waxaa ka mid ah bakhaarro, shaqooyinka safka isku xirnaanta, iyo dekedda maraakiibta. Haddii nooca caadiga ahi aanu buuxin karin shuruudahaaga, fadlan nala soo xiriir si aan u xaqiijino inay suurtagal tahay iyo in kale